Ny mpanamboatra mpamatsy sy mpamatsy solosaina - Ny orinasa Shina - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Product Introduction of flange fittings
Ny fitaovana fampiasa amin'ny rindrina dia ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny valizy, fitaovana na fitaovana fanenomana. Ny roa dia miray tsikombakomba miaraka amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy, kofehy, clamps, na fitaovana hafa hampiharana hery mahery vaika. Na dia mety hapetraka eo amin'ny elatra havanana aza ny gasket, packing, na ny O-ring dia tsy azo ampiasaina afa-tsy ny fetsy manokana na tsy misy na inona na inona (raha toa ka efa voafaritra tsara ny surfaces). Na dia be dia be aza ny fitaovana famolavolana, dia tsara izy ireo amin'ny fangatahana fangatahana toy ny tambajotram-pivoaran'ny rano sy ny rafitra hydroelektrik.
Product Parameter momba ny fametahana flange
1/2 & quot; -4 & quot;
Manao sary vongana mainty, galv., Miboridana vy sy kofehy matevina, ary tsy mahavita na inona na inona eny ambonin'ny tany
3000psi sy 6000psi misy
Ny ekipan'ny ekipa sy ny Drawing Dept. dia afaka mamolavola sy manamboatra fantsona araka ny fepetra manokana anananao.
Fiara karbona: A105 ETC.
Fivarotana alika: ASTM A182 F51 F52, ect.
10 isa izay miankina amin'ny fandaharana famokarana
Fitrandrahana solika, simika, machinery, herinaratra, sambo, fanorenana, fanorenana
Voalaza ao anaty kitapo plastika mafy aloha, ary avy eo eo amin'ny boaty, farany amin'ny fonosana na ascustomer's requirements
T / T 30% ny fandoavam-bola, fandoavam-bola aloa alohan'ny entana. na L / C
Ao anatin'ny 45 andro manaraka ny isa
Karazan-tsakafo sy fampiharana ny fametahana fametahana
1) Fitaovana: Steel karbon, Stainless steel, Stable legale
2) Vita: Manao sary vongana mainty, galv., Miboridana vy sy kofehy matevina amin'ny alàlan'ny kodiarana, ary tsy mahavita na inona na inona eny ambonin'ny tany
3) Faneriterena: 3000psi sy 6000psi misy
Mamokatra vokatra mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena toy ny SAE, DIN, ISO ary BS. Ankoatra izany, ny fanamafisana sy ny OEM dia misy ihany koa.
fampiharana:Ny vokatray dia ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny milina fanorenana, fitaterana, sambo, angovo, fiarovana ary automation.
Product Details momba ny fanonganam-biriky
Packaging Details:Voapetraka voalohany ao anaty kitapo plastika mafy, ary avy eo amin'ny boaty, farany amin'ny carton amin'ny palettes na amin'ny mpanjifa's requirements.
Fandefasana:Manana mpandraharaha ara-piraketana matihanina isika, mifototra amin'ny fangatahan'ireo mpanjifa amin'ny fitaterana amin'ny Express: FEDEX, DHL, EMS, UPS, TNT ary sns.
Amin'ny ranomasina sy ny Air.
Hot Tags: Ny fametahana volom-borona, China, mpanamboatra, mpamatsy, orinasa, vita tany Sina, mividy, mividy, maimaim-poana, an-tapitrisany, volombava, vidin'ny vidin-tsolika, kisary, avo lenta
Fiatoana ambony Hydraulic A105 Fiatoana fantson-kofehy matevina TRIFanamboarana rambondanitra